Nb Safal: प्रियसीलाई भ्यालेन्टाइन पत्र
प्रियसीलाई भ्यालेन्टाइन पत्र
अपार माया र न्यानो स्नेह !
मध्यरातमा मोबाइलले घण्टी बजायो । झसंग ब्युझिँए र मोबाइल हेरेँ । तिम्रो प्रेम सन्देश रहेछ । त्यती अबेरसम्म नसुतीकन १४ फेब्रुअरीको सुरुवाती मिनेटमै तिमीले गरेको प्रेमबर्षाले म निथ्रुक्कै भएँ । बिहान उठेपछि चियाको चुस्कीमा तिम्रो माया मिसाएर पिएँ । अरु दिनको चियामा भन्दा स्वाद बिल्कुलै फरक थियो, तिम्रो माया थपीएकाले ।
प्यारी, यो भ्यालेन्टाइन डे हाम्रो लागि विशेष भैकन पनि त्यति विशेष हुन सकिरहेको छैन । कारण यो हाम्रो पहिलो भ्यालेन्टाइन डे हो, तर यो महत्वपूर्ण दिनमा हामी सँगै हुन नपाउँदा निकै खल्लो भैरहेको छ । तिमी कामविशेषले काठमाडौँ बाहिर हुनुपर्दा हामीले यो विशेष दिन सँगै मनाउन पाएनौँ । मैले यो पल तिमिलाई निकै मिस गरिरहेको छु । लाग्छ तिमिले पनि मलाई याद गरिरहेकी हुनुपर्छ ।
भूकम्पले जुराइदिएको हाम्रो भेट यसरी प्रेममा परिणत होला भन्ने सायदै सोचिएको थियो होला । भूकम्पपछिको सामाजिक अभियानका क्रममा भएको निरन्तरको भेटघाटले हामिबिच सामिप्यता बढायो । त्यसपछिको नाकाबन्दीले हाम्रो सम्बन्धलाई झन् प्रगाढ बनाउँदै प्रेममा रुपान्तरण गरिदियो । समय र मौसम दुबैले साथ दिँदा यो छोटो समयमा नै हाम्रो प्रेमले निकै राम्रोसँग मौलाउने मौका पायो । भूकम्प र नाकाबन्दी बिचका सामाजिक अभियानका क्रममा हामिबिच हुने वार्तालाप, पुस÷माघ को चिसो साँझमा तातो कफिको चुस्किसँगै तिमिसँग बिताएका प्रेमील पलहरु सबै आज मस्तिष्कमा पुनर्जाग्रीत भैरहेको छ । मेरो धड्कन तिम्रो यादमा धड्कीरहेको छ । कहिलेकाहिँ त तिम्रा यादहरुले मुटु यस्तरी हल्लाउँछ कि, बैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनहरुले बारपाक के हल्लियो होला र !
यतिखेर मेरा नयनहरु तिमीलाई खोजीरहेका छन् । तिमी काठमाडौँ फिरेसँगै तिमी र मैले फेरी प्रेमिल पल बिताउनु छ । मैले हाम्रो लागि केही सपनाहरु सजाएको छु । हाम्रो बिहेपश्चात काठमाडौँको व्यस्त बस्तीबाट अलि टाढा रमाइलो वातावरणमा हाम्रो घर बनाउनु पर्छ । काठमाडौँमा लभ पार्क बनाउने केशव स्थापितको सपनाले मूर्त रुप पाउन सकेन । यदि त्यो सपना पूरा हुन पाएको भए तिमी र म जस्ता थुप्रै प्रेमजोडी खुशी हुने थिए होलान् । तर पनि मैले योजना बनाईसकेको छु की हाम्रो घरको कौशीमा गुलाब बगैँचा बनाउनु पर्छ, जहाँ तिमी र मैले घण्टौँसम्म प्रेमील पलहरु बिताउन सकुँ ।
तिम्रा लागि अरुपनि थुप्रै खुशीका खबरहरु छन् । हामीले घर बनाइसके पछि तिमीलाई घर व्यवस्थापनको टाउको दुखाई हुनेछैन । मलाई पनि केही राहत अवश्य हुनेछ । ग्याँसको सिलिण्डर कुरेर रातभरी डिपोबाहिर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहने छैन, घरमा ग्यासको पाइपलाइन जोडौँला, जसले हामीलाई निकै सजिलो बनाउने छ । मेलम्चीको पानी घरका धाराहरुबाट जुनसुकै बेला बगिरहनेछन् । घरमा सरकारले अनुदानमा दिने सोलार प्यानल राखौँला जसले जाडो महिनामा पनि तातो पानीले नुहाउने सुविधा हुनेछ ।
कहिलेकाहीँ तिमी भन्ने गर्छौ नि, राइसकुकरमा भात पकाउँदा पकाउँदै लाइट गएर भात काचै भो । हाम्रो घर बनिसकेपछि त्यो समस्याबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ । घरमा हावाबाट निस्कने बिजुली जडान गरौँला । हावाबाट निस्किएको बिजुली बत्तिले २४ सै घण्टा घर झिलिमिली हुनेछ ।
प्यारी, आज अफिस हिँड्दा बाटोभरि देखीएका प्रेमजोडीहरुले तिम्रै याल दिलाइरहे । भ्यालेन्टाइन भएर पनि भ्यालेन्टाइन डे मनाउन नपाउँदाको पिडाले भत्भती पोलीरहेको छ छाती । कहिले तिमीलाई भेटुँला र मनलाई शितल बनाउन पाउँला जस्तो भइरहेको छ । तिम्रो केश र औँलाहरुलाई स्पर्श गर्दै तिम्रो मुस्कानमा हराउन मन छ मलाई ।
तिमी भन्छ्यौ नि माइक्रोबसमा कोचिएर यात्रा गर्न गाह्रो भो भनेर । अब त तिमी र म यो शहर सँगसँगै घुम्नुपर्छ, यहाँ गुड्ने मेट्रो रेलमा चढेर । तिम्रो शिरको सिरानी बन्न आँतुर छन् मेरा काँधहरु । तिमीलाई आलिङ्गनमा बाँधेर संसार घुम्ने रहर जागेको छ ।
प्यारी, धेरै दिन भो यो शहरका क्याफेहरुमा बसेर मैले पिउने कफिमा तिम्रो अभाव खड्कीएको । कफिका चुस्कीहरुले तिम्रो साथ खोजीरहेका छन् । तिमी काठमाडौँ फिरेपछि हामीले यो भ्यालेन्टाइन डे को पूर्ती गर्नुपर्छ । एक साँझ कफिको चुस्कीसँगै प्रेमील समय बिताउन पर्छ । म तिम्रो प्रतिक्षामा छु ।
तिमीलाई भ्यालेन्टाइन डे को धेरै शुभकामना !